न्यु मिडियाको लतमा त परेका छैनन् बालबालिका ?
काठमाडौंँ । मोबाइल र इन्टरनेट अर्थात् न्यु(नयाँ) मिडिया ज्ञान, सूचना र मनोरञ्जनका लागि आधुनिक गुरु नै हुन् तर तिनको ठिक तवरले उपयोग नगर्दा भने बालबालिकामा लत बस्ने खतरा हुन्छ । कतै अभिभावकले नै आफ्नो बालबालिकालाई मोबाइल, इन्टरनेटको लतमा लगाएको छैन ? विचार पु¥याउने बेला आएको छ ।
अभिभावकले नै जानी नजानी बालबालिकालाई इन्टरनेटको लत लगाएरहेका पो छौँ कि रु त्यस्तो लत समयमै छुटाउने प्रयास गर्नु उचित हुन्छ । ससाना नानीहरू जतिखेर पनि युट्युव, अनलाइन गेम तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ब्यस्त भएको देखिन्छ । अभिभावको समस्या भनेकै आफ्नो बालबालिका बाहिरी खेल खेल्ने भन्दा पनि मोबाइल, ट्याबमा भुलिरहेका हुन्छन् ।ष्लतभच
आफुले बालबालिको सामुन्ने मोबाइल, ट्याब वा ल्यापटप चलाएको देखेपछि उनीहरूलाई पनि चलाउन चाहन्छन् । त्यसैले पनि बालबालिको सामुन्ने भरसक नचलाउन उहाँको सुझाव छ ।
कति अभिभावकलाई थाहा नहुन सक्छ , फेसबुक १३ वर्ष भन्दा कमको बालबालिकाले चलाउन पाउँदैन तर फेसबुक फेसन र फोटो देखाउने रूपमा पनि साना बालबालिकाको फेसबुक अकाउन्ट बनाएर चलाइरहका हुन्छन् ।
अहिलेका आमाबुवाहरू आफ्नो बालबालिकाले इमेल इन्टरनेट चलायो ट्याब या मोबाइल आफै चलायो भनेर दङ्ग हुने गर्छन् तर कसरी बालबच्चा इन्टनेटमा फसिरहेको भन्ने बिर्सन्छन् ।
गृहणी सत्य मुल्मी पनि पाँच वर्षको छोराले युट्युवमा विभिन्न भिडियो हेरेर हैरान हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जुनै पनि समय युट्युवमा झुन्डिरहेको हुन्छ । लत नै लागि सक्यो । नदिउ भने रुन्छ दुःख दिन्छ के गर्नु ।’
आफुले मोबाइल चलाउँदा बच्चाले पनि मोबाइल माग्ने गरेको भने उहाँलाई मेसो नै छैन र भन्नुहुन्छ, यो त मैले याद नै गरिन, बाबुसँग म पनि खेल्दा मोबाइलको वास्ता हँुदैन मैले मोबाइल चलाउँदा उसलाई पनि हेर्नै पर्छ ।
करुणा चापाँगाईको समस्या पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ, मेरो मुख देख्यो कि मेरो छोरालाई मोबाइल चाहिन्छ र अनलाइन गेम खेल्न थाल्छ ।
रघुवंशीको भनाइमा अभिभावकले के पनि आफुले मोबाइल वा ल्यापटप चलाउँदा विचार पु¥याउनुपर्छ । बालबालिकालाई पढ् भनेर गाली गर्ने र आफू भने इन्टरनेट चलाएर बस्ने त्यस्तो गर्नुहुँदैन । अनलाइन इन्टरनेटबारे ज्ञान हुन आवश्यक पर्छ ।
बालबालिकाले विभिन्न वेबसाइटमा के हेर्न भन्नेबारे ज्ञान लिनुपर्छ । उनीहरु सँगै बसेर साइट अवलोकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि डिभाइसमा सेफ्टी डिभाइस प्रयोग गर्न सकिन्छ । बालबालिकालाई समय दिनुपर्छ सो समयमा मोबाइल वा अन्य डिभाइसहरु चलाउनुहुँदैन । इन्टरनेट चलाउने समय र नियमहरु आफुले बनाइदिनुपर्छ र त्यो आफुमा पनि लागु गर्नुपर्छ । गाेरखापत्रबाट